Ilhaan Cumar oo Ra'iisulwasaaraha Hindiya eedayn u jeedisay - BBC News Somali
"Sharciga Ra'iisulwasaare Modi ee Hindiya wuxuu ku raacayaa faafinta rabshadaha ay wadaan Hindida iyo Islaam nacaybka ka dhanka ah Muslimiinta, Dowladda Mareykanka waxaa looga baahanyahay inay u istaagto sidii dalka Hindiya looga hirgelin lahaa xoriyad dhanka diinta ah si dadka laga tirada badanyahay loola dhaqmo si cadaalad ah." Ayey barteeda Twitter-ka ku soo qortay Ilhaan Cumar.
Image caption Mr Modi
"Bangladeshi miyaa tahay"? Ayuu mid ka mid ah weydiiyay, iyaga oo weydiinaya inuu yahay muwaadin dalka u dhashay.
"Maxaad halkan hilibka ugu iibisaa"? ayuu mid kalana weydiiyay.
Image caption Mr Ali
"Weerar ka dhan ah diinta"
"Waxay igu garaaceen ul, waxay iga dharbaaxeen wajiga," Ayuu yiri isaga oo warbaahinta tusinaya dhawaawacyada soo gaaray.
Muddo toban sano ah waxay qoyskiisa iibin jireen hilibka lo'da, balse weligood ma aysan wajahin dhibaatadan.
Gobollada qaar ayaa waxa laga mamnuucay iibinta hilibka lo'da maxaa yeelay Hindida qaar ayaa waxay caabudaan lo'da.